Uxinzelelo lwabantwana, imeko ekhulayo | Oomama Namhlanje
UMaria Jose Almiron | | Unonophelo, ZeMpilo, Ezahlukeneyo
Ukuba sithetha ngempilo yabantwana, enye yezona zinto zijolise kuzo kukutya. Isondlo esifanelekileyo sinokukhokelela kuphuhliso oluhambelanayo lwe-metabolism kunye nobomi obunempilo. Ngokuchasene noko, xa ukutya kungondlekanga, kunqabile okanye kungalingani, kuvela iingxaki zempilo. Ukutyeba kakhulu, ukungondleki, iingxaki zophuhliso, iingxaki zokufunda. Kwakhona abantwana abanexinzelelo, imeko ekhulayo enxulumene ngokusondeleyo nokwanda kokutyeba komntwana.
Ngokwengxelo yokutya yeUNICEF ibizwa Umbuso waBantwana beHlabathi be-2019: Abantwana, ukutya kunye nesondlo, ubuncinane omnye kubantwana abathathu ongaphantsi kweminyaka emihlanu akondlekanga okanye utyebile. Phantse abantwana aba-2 kwaba-3 abaphakathi kweenyanga ezi-6 kunye neminyaka emi-2 abafumani kutya kulungileyo, into enokonakalisa impilo yabo iyonke. Ukusuka kwiingxaki ekukhuleni kwengqondo, ubunzima bokufunda, amajoni omzimba abuthathaka, utyekelo olukhulu kusulelo, njl. Eyona nto imangalisayo kukuba le ngxelo ayigxininisi ukungondleki nje kuphela kodwa ikwagxininisa kwiziphumo zokungondleki.
1 Ukungondleki kunye noxinzelelo lwegazi
2 Ukutyeba kakhulu kunye noxinzelelo lwegazi ebantwaneni
3 Umngcipheko wabantwana abanexinzelelo
Ukungondleki kunye noxinzelelo lwegazi
Kumashumi eminyaka eyadlulayo kwakunzima ukufumana abantwana abanexinzelelo eofisini kagqirha. Okanye ukuba bekukho, uxinzelelo lwegazi lwalunxulunyaniswa nezinye iingxaki, njengesifo sezintso, njl. Isantya sobomi namhlanje esongezwe kutshintsho kwindlela yokutya - nabazali abanexesha elincinci - itshintshile indlela esitya ngayo.
“Izigidi zabantwana ziphila ngokutya okungenampilo kuba zingenandlela ibhetele. Indlela esiqonda ngayo nesiphendula ngayo kukungondleki kufuneka itshintshe: ayikokufumana abantwana ukuba batye ngokwaneleyo; ubukhulu becala kukufumana kwakho yitya ukutya okufanelekileyo. Lowo ngumceli mngeni kuthi sonke namhlanje, utshilo uHenrietta Fore, uMlawuli oLawulayo weUNICEF. Ngaphakathi kwinto yokungondleki kwabantwana kwinkulungwane ye-XXI, izinto ezintathu eziqwalaselweyo: ukungondleki, ukunqongophala kwezakha mzimba kunye nokwanda kwabantwana abangaphantsi kweminyaka emi-5 ubudala abatyebe kakhulu.
Ukutyeba kakhulu kunye noxinzelelo lwegazi ebantwaneni
Ukutya okungalunganga kukhokelela abantwana abanexinzelelo, nesifo seswekile kunye ukukhuluphala. Iinkcukacha-manani ziyamangalisa: Ngokwengxelo, kwihlabathi liphela, malunga neepesenti ezingama-45 zabantwana abaphakathi kweenyanga ezintandathu ukuya kwiminyaka emibini abazifumani iziqhamo okanye imifuno. Ngelixa ama-60% engatyi amaqanda, iimveliso zobisi, intlanzi okanye inyama. Njengoko bekhula, ezinye iingxaki ziyavela.
Ukuvezwa okugqithisileyo kwintengiso kuthoba ukutya okusempilweni. Ulutsha lutya ukutya okunesondlo okuninzi, ukungondleki kwezakhamzimba, iiprotein, iivithamini kunye neeminerali. Kwaye imeko iphindaphindwe kumazwekazi ahlukeneyo. Ngokwe-UNICEF, iipesenti ezingama-42 zabakwishumi elivisayo abaya esikolweni kumazwe anengeniso ephantsi naphakathi bafumana iziselo ezineswekile okungenani kanye ngemini kwaye i-46% itya ukutya okukhawulezayo ubuncinci kanye ngeveki. La maxabiso anyuka aya kuma-62% kunye nama-49% kulutsha olufumana kumazwe aphezulu.
Umngcipheko wabantwana abanexinzelelo
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu yingxaki enkulu, ngakumbi ukuba ivela kubuntwana. Ukuba imeko ye abantwana abanexinzelelo Ukuqhubekeka ebudaleni baya kuba semngciphekweni omkhulu wokungaphumeleli kwentliziyo, isifo sentliziyo, ukubetha, kunye nesifo sezintso. Ngesi sizathu, kubalulekile ukwenza ulawulo olungqongqo ebuntwaneni bonke ukuze wenze ijika lihle.
Ngaba ukutya okungalunganga xa ukhulelwe kubangela ukutyeba emntwaneni?
Elinye lamaqhosha okwenza silwe uxinzelelo lwegazi ebantwaneni kungokutya. Ukutya okunezondlo okujongwa yingcali yezondlo etyebile kwimifuno nakwiziqhamo kufuneka kulandelwe. Kwakhona imicu esempilweni kunye namafutha. Ukutya kufuneka kuthathelwe ingqalelo zombini iintlobo zokutya kunye nobungakanani, kunye nokususa iimveliso ezinamafutha amaninzi, iisoseji, amashwamshwam, iilekese, iilekese nako konke ukutya okungenamsoco. Kubalulekile kwakhona ukumodareyitha ukusetyenziswa kweswekile kunye netyuwa. Ukusebenza ngokwasemzimbeni sesinye isitshixo sokunciphisa uxinzelelo lwegazi ebantwaneni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Unonophelo » ZeMpilo » Uxinzelelo lwabantwana, imeko ekhulayo
ICyberkids: ezona mpawu ziphambili